‘हामीलाई ईश्वरले मात्रै बचाएको हो’ |
‘हामीलाई ईश्वरले मात्रै बचाएको हो’
प्रकाशित मिति :2017-11-02 15:38:28
उनका ९ वटा बच्चाको मृत्यु भइसकेको छ, भने ७ बच्चा जीवित छन् । १४ वर्षमा बिहे गरेकी बिस्नकलाको ४१ वर्षको उमेरसम्मको देखिने गरिको मुख्य काम भनेको बच्चा जन्माउने मात्रै हो । बाजुरा जिल्लाको पनि दुर्गम गाउँकी बिस्नकलासँग धेरै सन्तान किन जन्मिए भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन । श्रीमान् जैधन थापा भन्छन्, “रोक्ने साधन केही भएन, उपाय पनि केही जानिएन । त्यसैले धेरै बच्चा जन्मिए ।” जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराको आकस्मिक प्रसूति केन्द्रका मेडिकल अधिकृत डा. टीकाराम राई भन्छन्, “धेरै बच्चा जन्माउँदा बिस्नकलालाई रक्तअल्पता समेत भइसकेको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै कमजोर छ ।”
चारवटा पेटमै मरेका जन्मे’
काम ग¥यौं । बच्चा बोकेर पनि अरुको काम गर्न गयौं । बच्चा बोक्दै पोर्सो (गोठे मल) बोक्यौं । धान कुट्यौं । बच्चालाई ओछ्यानमै छोडेर घाँसपात गर्न गयौं । दाउरा ल्यायौं । हाम्रो पढाइलेखाइ थिएन । भारी बोकेर, काम गरेर बच्चा पाल्यौं । आफ्नो त काम बच्चा पाउने जस्तो मात्रै भयो ।
धेरै बच्चा जन्माउँदा स्वास्थ्यमा के समस्या प¥यो ?
खान, लगाउन र बस्न समस्या भयो । बच्चा पाउँदा छि छि भनेर घर आउन दिंदैनथे । हामीलाई गोठमै राखिन्थ्यो । गोठमा चिसोले बिरामी भइन्थ्यो । घरकै ओखती मूलो, घरकै जडीबुटीले उपचार गर्थे । उ वेला स्वास्थ्य (चौकी) थिएन । धेरै बच्चा हुँदा धेरै समस्या भयो । कहिले मागेर काम चलाउनुप¥यो । कहिले अरुको खेतीपातीमा काम ग¥यौं । अरुकै काम गरेर बच्चा पाल्यौं । मर्ने मरिगए बाँच्ने बाँचिगए । बाँचेका बच्चा पाल्न पनि सारै दुःख भयो ।